१०८ मेगापिक्सल क्यामरा भएको सामसङको फोन :: Setopati
सामसङ नेपालले भर्खरै एस२१ सिरिज नेपाली बजारमा ल्याएको छ। ती हुन्ः ग्यालेक्सी एस२१, एस२१प्लस र एस२१ अल्ट्रा।
यी सिरिजमा आधुनिक डिजाइन, इपिक प्रो ग्रेड क्यामरा, भिडियो र अहिलेसम्मकै शक्तिशाली प्रोसेसर राखिएको कम्पनीको भनाइ छ।
यहाँ ‘सामसङ ग्यालेक्सी एस–२१’ का फिचरबारे उल्लेख गरिएको छ।
यस फोनमा अत्याधुनिक चिपसेट तथा स्पिड इफिसियन्सीको समायोजन गरिएको छ। यसले फाइभजी कनेक्शन तथा अन डिभाइस एआइलाई सपोर्ट गर्दछ। त्यसैले फोटो प्रोसेस, डप भिडियो रेकर्ड, गेमिङ्ग म्याराथोन तथा भिडियो इडिट सहजै गर्न सकिन्छ।
ग्राहकले यो ८ जिबी र्‌याम २५६ जिबी रोम क्षमतामा किन्न पाउँछन्। यसको मूल्य १ लाख ९ हजार ९९ रूपैयाँ छ।
कम्पनीले हाल यसको प्रि–बुकिङ खुलाएको छ।
प्रि बुकिङ्ग गर्ने ग्राहकहरुलाई सामसङले आकर्षक उपहार दिने बताएको छ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ ११, २०७७, ०१:४१:००
क्लासिक टेकका १०१औँ आउटलेट नेपालगञ्जमा
अब सस्तोमै पाउनुहोस् रियलमी–६ आइ, घट्यो मूल्य
१३ मेगापिक्सल क्यामरा भएको ओपो फोन, मूल्य कति?
तीन युवाबाट सुरू भएको एफवानसफ्ट १८औँ वर्षमा, एक हजारलाई रोजगारी
६ महिना पानीमा डुब्दा नबिग्रेको आइफोन!
सफ्ट्वेरिकामा दोश्रो आइओटी प्रदर्शनी हुँदैः अटोनोमस भेइकलदेखि रेस्क्यु ड्रोनसम्म